ဆရာဝန်တောင် မယုံနိုင် တဲ့ သွေးကြောများ အ တွင်း ပိတ် ဆို့နေသောအဆီများ ကို ရှင်း ထုတ်ပေးနိုင် တဲ့ ကြွက်နားရွက်မှို – Shwewiki.com
ဆရာဝန်တောင် မယုံနိုင် တဲ့ သွေးကြောများ အ တွင်း ပိတ် ဆို့နေသောအဆီများ ကို ရှင်း ထုတ်ပေးနိုင် တဲ့ ကြွက်နားရွက်မှို
ကျော်မသွား နဲ့ ဖတ်ပါ…မိမိ friends များအတွက်ရှယ်ပေးပါ.. အရင်အပတ်က နှလုံးသွေးကြော ပိတ်ဆို့ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကို ပြောပြခဲ့တယ်…..
ဒီ အပတ်မှာတော့ အဲဒီ့လိုပိတ်ဆို့နေတာကို အလွယ်တကူရှင်းထုတ်ပစ်နိုင်တဲ့ နည်းကောင်းတစ်ခုကို ပေးပါမယ်၊America မှာ ချမ်းသာတဲ့တရုတ်လူ
မျိုးတစ်ယောက် ရှိပါတယ်….ဝက်သား၊ အမဲသား၊ ဘဲသားစတဲ့ ကုန်းသတ္တဝါအသားတွေကို ကြိုက်နှစ်သက်လို့ အမြဲတန်းစားလေ့ရှိသူပေါ့၊ လှုပ်ရှားမှုကလည်း သိပ်မရှိဘဲ ဇိမ်ခံတာသာများတယ်…
သူလည်း စိတ်တော်တော်ညစ်သွားပြီး တရုတ်ရိုးရာတိုင်းရင်း ဆေးဆရာကြီးတွေဆီကို သွားပါတယ်၊တိုင်းရင်းဆေးဆရာကြီးက သူ့ကိုနေ့စဉ်ကြွက်နားရွက်မှိုကို စားခိုင်းပါတယ်….
ဘာဟင်းချက်ချက် ကြွက်နားရွက်မှိုသုံးလေးခုလောက် ထည့်ချက်ပြီး စားခိုင်းတော့ သူလည်းမပျက်မကွက် စားပါတယ်ဒီလိုနဲ့ ၃ပတ်အကြာ ဆရာဝန်ဆီပြန်ပြတော့ သူ့ရဲ့ပိတ်နေတဲ့ နှလုံးသွေးကြော ၃ချောင်းလုံးဟာ လုံးဝပြန်ပွင့်သွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်….
နှလုံးသွေးကြောပိတ်ဆို့မှုကို အလွယ်တကူဖြေရှင်းပေးလိုက်တာကတော့ ကြွက်နားရွက်မှိုပဲဖြစ်ပါတယ် သွေးကြောတွေထဲမှာ ပိတ်ဆို့နေတဲ့ အနည်အနှစ်တွေ ကိုကြွက်နားရွက်မှိုက လွယ်ကူစွာရှင်းလင်းပေးပါတယ်….
အဲဒီ့ရောဂါနဲ့ပဲသေကြရတာလည်းများပါတယ်….ကြွက်နားရွက်မှိုကအဲဒီပြဿနာကိုကောင်းကောင်းဖြေရှင်းပေးပါတယ်၊ အိမ်မှာ လူကြီးမိဘတွေရှိရင်ကြွက်နားရွက်မှိုကိုကျွေးပါ၊ အသက်ရှည်ပါလိမ့်မယ်….
ဒါမှသူ့အထဲကကောင်းတဲ့ဓာတ်တွေထွက်လာမှာဖြစ်တယ်….အ မြဲ တန်း စား ပေး ရင် သွေး ကြဲ ဆေး သောက် နေ ရ သူ တွေ တောင် ဆေး သောက် ဖို့ မ လို တော့ အောင် ကောင်းနေ ပါ
လိမ့် မယ် သွေး ကြော လည်း ရှင်း အ ဆီ လည်း ကျ ဆို တော့ ကျန်း မာ ရေး လည်း ကောင်း လူ လည်း လှ တာပေါ့ ၊ ဘယ် လောက် ကောင်း လိုက် မ လဲ နော်…..
ကြျောမသှား နဲ့ ဖတျပါ…မိမိ friends မြားအတှကျရှယျပေးပါ.. အရငျအပတျက နှလုံးသှေးကွော ပိတျဆို့ရတဲ့အကွောငျးရငျးတှကေို ပွောပွခဲ့တယျ…..
ဒီ အပတျမှာတော့ အဲဒီ့လိုပိတျဆို့နတောကို အလှယျတကူရှငျးထုတျပဈနိုငျတဲ့ နညျးကောငျးတဈခုကို ပေးပါမယျ၊America မှာ ခမျြးသာတဲ့တရုတျလူ
မြိုးတဈယောကျ ရှိပါတယျ….ဝကျသား၊ အမဲသား၊ ဘဲသားစတဲ့ ကုနျးသတ်တဝါအသားတှကေို ကွိုကျနှဈသကျလို့ အမွဲတနျးစားလရှေိ့သူပေါ့၊ လှုပျရှားမှုကလညျး သိပျမရှိဘဲ ဇိမျခံတာသာမြားတယျ…
သူလညျး စိတျတျောတျောညဈသှားပွီး တရုတျရိုးရာတိုငျးရငျး ဆေးဆရာကွီးတှဆေီကို သှားပါတယျ၊တိုငျးရငျးဆေးဆရာကွီးက သူ့ကိုနစေ့ဉျကွှကျနားရှကျမှိုကို စားခိုငျးပါတယျ….
ဘာဟငျးခကျြခကျြ ကွှကျနားရှကျမှိုသုံးလေးခုလောကျ ထညျ့ခကျြပွီး စားခိုငျးတော့ သူလညျးမပကျြမကှကျ စားပါတယျဒီလိုနဲ့ ၃ပတျအကွာ ဆရာဝနျဆီပွနျပွတော့ သူ့ရဲ့ပိတျနတေဲ့ နှလုံးသှေးကွော ၃ခြောငျးလုံးဟာ လုံးဝပွနျပှငျ့သှားတာကိုတှရေ့ပါတယျ….
နှလုံးသှေးကွောပိတျဆို့မှုကို အလှယျတကူဖွရှေငျးပေးလိုကျတာကတော့ ကွှကျနားရှကျမှိုပဲဖွဈပါတယျ သှေးကွောတှထေဲမှာ ပိတျဆို့နတေဲ့ အနညျအနှဈတှေ ကိုကွှကျနားရှကျမှိုက လှယျကူစှာရှငျးလငျးပေးပါတယျ….
အဲဒီ့ရောဂါနဲ့ပဲသကွေရတာလညျးမြားပါတယျ….ကွှကျနားရှကျမှိုကအဲဒီပွဿနာကိုကောငျးကောငျးဖွရှေငျးပေးပါတယျ၊ အိမျမှာ လူကွီးမိဘတှရှေိရငျကွှကျနားရှကျမှိုကိုကြှေးပါ၊ အသကျရှညျပါလိမျ့မယျ….
ဒါမှသူ့အထဲကကောငျးတဲ့ဓာတျတှထှေကျလာမှာဖွဈတယျ….အ မွဲ တနျး စား ပေး ရငျ သှေး ကွဲ ဆေး သောကျ နေ ရ သူ တှေ တောငျ ဆေး သောကျ ဖို့ မ လို တော့ အောငျ ကောငျးနေ ပါ
လိမျ့ မယျ သှေး ကွော လညျး ရှငျး အ ဆီ လညျး ကြ ဆို တော့ ကနျြး မာ ရေး လညျး ကောငျး လူ လညျး လှ တာပေါ့ ၊ ဘယျ လောကျ ကောငျး လိုကျ မ လဲ နျော…..
ဆီး ချို ရှိ သူ များ အတွက် ငှက်ပျော သီး စိမ်း ဆေး နည်း
ကိုကြီးတွေ ကိုပဲကြိုက်ပေမယ့် လာကြိုက် တဲ့သူတွေ က မောင်လေးတွေ ပဲဖြစ်နေတယ် လို့ပြောလာ တဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်